घर फुटबल EXTRAS फुटबल प्रबन्धकहरू ब्रान्डन रोडर्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ब्रान्डन रजर्सको हाम्रो जीवनीले उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, अभिभावक, पत्नी, बच्चाहरू, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू चित्रण गर्दछ।
छोटकरीमा, हामी उत्तरी आयरिश पेशेवर फुटबल प्रबन्धकको इतिहास चित्रण गर्दछौं। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिनहरुबाट शुरू हुन्छ, जब उनी लिसेस्टर शहरको साथ प्रख्यात भए। तपाइँलाई ब्रान्डन रोडर्सको बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
जीवन र ब्रान्डन रजर्सको उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको कूल-हेड प्रबन्धकीय शैलीका बारे बललाई कब्जामा राख्नुहोस् र बल निरन्तर चलिरहँदा एक बगिरहेको पासिंग खेल खेल्नुहोस्। जहाँसम्म, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरू हाम्रो ब्रान्डन रोडर्स जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उपनाम "बक रोडर्स" बोक्छ। ब्रान्डन रजर्सको जन्म जनवरी १ 26 1973 January को २ XNUMX औं दिनमा आमा, क्रिस्टिना रजर्स र बुवा, कार्नलफको मालाची रोडर्समा भएको थियो, जुन उत्तरी आयरल्याण्डको समुद्रीतट गाउँ गुगल नक्शाबाट तल चित्रित छ।
ब्रेन्डन रजर्स कर्नेललोको समस्याग्रस्त गाउँमा हुर्किए।
उत्तरी आयरिश परिवारको मूलको साथ सफल अ manager्ग्रेजी प्रबन्धक उहाँकी आमा-बुबा क्रिस्टिना (आमा) र मालाची (बुबा) को लागि जन्मेको पाँच छोराहरूको जेठो बच्चाको रूपमा हुर्कियो। ब्रान्डन रजर्स एक मध्यम पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आए जुन उनका बुबाले संचालित गर्नुभयो जुन एक चित्रकार र डेकोरेटर थियो। जबकि उनका बुवा आफ्नो पेन्टि and र सजावटको काममा व्यस्त छन्, ब्रेंडनको आमा, क्रिस्टिनाले सानो ब्रान्डन र उनका भाइहरूको हेरचाह गरे। उनी कहिलेकाँहि आफूलाई आयरिश दान संस्थाको स्वयंसेवकको रूपमा संलग्न गराउँछिन्।
ब्रान्डन कर्नेलको समस्याहरूको अनुभव गर्दै हुर्किए:7वर्षको सानो बच्चाको रूपमा, ब्रान्डन अन्य बच्चाहरू मध्येका थिए जो प्राय: ग्राउन्ड (घर भित्रै राखिएका थिए) किनभने उसको समस्याग्रस्त गाउँमा उच्च अपराध दर थियो। अपराधको कुरा गर्ने हो भने, जून4को 1980th मा, आयरिश स्वतन्त्रता पार्टी सदस्य र लार्ने बरो काउन्सिलका जोन टर्नलीको गाउँमा सशस्त्र अभियान मार्फत हत्या गरियो। यसपछि लोयल्ट ब्यान्ड्सम्यान, एन्ड्र्यू मेसनको मृत्यु भयो, जसलाई गाउँमा दुई स्थानीय मानिसहरूले पिटे।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
निद्रा लाग्ने उत्तरी आयरिश गाउँ कर्नेलफमा, ब्रेन्डनलगायत अधिकांश साना केटाहरूको लागि शून्यता समाप्त भयो जब उनीहरूको खुट्टामा फुटबल थियो। जहाँसम्म फुटबलको खेलको सवाल हो, ब्रेन्डन रोडर्स परिवारको फ्यानबेसमा उचित प्रतिनिधित्व गरिएको थियो शेफील्ड बुधवार र सेल्टिक.
रजर्स खेलको अवधिमा फुटबल खेल्थे जब उनी भाग लिए सबै संत क्याथोलिक प्राथमिक स्कूल उत्तरी आयरल्याण्डको एउटा सहर बल्लीमेनामा - आफ्नो परिवारको घरबाट २ minutes मिनेट टाढा छ। खेलमा भाग लिने मात्र परिवारमा मात्र चलिरहेको थिएन। त्यतिखेर, ब्रान्डन रोडर्सका अभिभावकहरू आफ्ना केटाहरूलाई केवल शिक्षा प्राप्त नगर्न चाहान्थे, तर अझै अतिरिक्त क्यारियर पनि उठाउँछन्।
ब्रान्डनले फुटबल छनौट गर्दा, उनको बच्चाको एक भाइले संगीत लिए, यो निर्णयले उनको परिवारलाई कुनै समय बिना गर्व भयो। तपाईंलाई थाहा छ?… ब्रान्डन रजर्सको परिवार उनका बच्चा भाई मालाची जेनरको प्रारम्भिक सफलताको साथ धैर्यताका साथ प्रसिद्ध देश र पश्चिमी गायक बने।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन जीवन
जबकि उसको सानो भाईले आफ्नो संगीत क्यारियरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्‍यो, ब्रान्डन रजर्सले फुटबल क्यारियर सुरु गर्न खोजमा आफ्नै दिशा लिए। वर्ष 1984 मा एक सफल परीक्षण पछि, सानो रोडर्स (तल चित्रमा) आफ्नो युवा करियर बल्यामेना युनाइटेड, उनको स्थानीय टीमको साथ डिफेन्डरको रूपमा शुरू गरे।
ब्रान्डन रजर्स आफ्नो शुरुआती वर्षहरूमा बल्लीमेनासँग एक युवाको रूपमा।
आफ्नो खेलको दिनहरूमा, ब्रान्डन रोडर्सले सँगी उत्तरी आयरिशियनको मूर्ति बनायो एन्टोन रोगन जो एक्सएनयूएमएक्स वर्ष उसको वरिष्ठ थियो। उनले आफ्नो युवा क्यारियरमा ठूलो प्रभाव पारे, यो एउटा त्यस्तो उपलब्धि हो जुन उनले एकेडेमीबाट स्नातक हुनु अघि नै उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अझै एक एकेडेमी खेलाडी हुँदा, ब्रान्डन रजर्सलाई स्कूलको स्तरमा उत्तरी आयरल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्न भनिएको थियो। कम उमेरमा यस्तो परिपक्वता 1987 मा उनको क्लब वरिष्ठ फुटबल मा उसलाई देख्यो।
ब्रान्डन रजर्स आफ्नो स्कूलबॉय टीमसँग प्रारम्भिक वर्षहरू।
रड्जर्सले एकेडेमी स्नातक पछि आफ्नो गाउँमा साथ प्रगति गरिरहे। सन् १ 1988 XNUMX मा, उनी उत्तरी आयरल्यान्डको प्रतिनिधित्व गर्न छोडे पछि ऊ सेन्ट प्याट्रिक कलेजमा सरे पछि उनले विश्वको सर्वश्रेष्ठ फुटबल देशको बिरूद्ध खेले। ब्राजिल.
ब्रान्डन रजर्स फुटबल खेल्न चाहन्छन् जुन उसको टोलीले खेल्ने युगमा खेल्न चाहन्छ जब उत्तरी आयरिश पूर्णतया अनसुना थियो। पछि, आफ्नो पूर्व प्रशिक्षक सम्झन सक्छ कि ऊ कसरी यति ऊर्जावान थियो र देशको वरिष्ठ टीम को भविष्य को रूप मा सम्मानित थियो। यी सबै प्रशंसाहरूको बावजुद, ब्रान्डन रोडर्सलाई यस बारे थोरै थाहा थिएन डर्क टिमहरू उसको बाटो आउँदैछ।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीको कठिन मार्ग
बल्यामेना युनाइटेडका साथ पेशेवर परिर्वतन गरेपछि 18 को उमेरमा ब्रेन्डन रोडर्स पढ्नको लागि हस्ताक्षर गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको प्रोफेशनल फुटबल क्यारियर अचानक आकस्मिक अन्त्यमा ल्याइएको थियो यो आनुवंशिक घुँडाको अवस्थाको कारणले सुरु हुन थाल्छ पारिवारिक ओस्टियोचोन्ड्राइटिस डिसेक्सन्स.
ब्रान्डन रजर्स आनुवंशिक घुँडाको अवस्थाबाट ग्रस्त थिए जसले उसको फुटबल क्यारियरलाई पक्षाघात पुर्यायो।
कुनै श .्का बिना, कुनै पनि फुटबलर जो यस्तो चोटपटकबाट गुज्रिरहेको छ र क्यारियरको एकाएक अन्त्यमा पुग्दछ, यसले कत्तिको गहिरो भावनात्मक पीडा हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्र थाहा पाउँदछ। यो घटनाको कारण दुबै भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक आघातलाई जित्न ब्रान्डन रजर्सलाई वर्षौं लाग्यो।
उनको लागू गरिएको सेवानिवृत्ति पछाडि रजर्सलाई पढाइले क्षतिपूर्ति दियो जसले उसलाई काम प्रदान गर्‍यो युवा कोच। थप कोचिंग अनुभव प्राप्त गर्न, रोडर्स युवा न्यु-लीग फुटबल न्युपोर्ट (आईडब्ल्यू), विटनी टाउन र न्युबरीको साथ युवा प्रशिक्षकमा गए। साथै, युवा कोचको रूपमा आफ्नो थोरै तलब थप्नको लागि, ब्रान्डन रोडर्सले काम गर्न शुरू गर्यो जॉन लुईस स्टोर उनको युवा परिवार समर्थन गर्न।
पढ्नुहोस् जुलियन नागेल्सम्यान बालपण कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
ब्रान्डन रजर्सले एक पटक जोन लुइस स्टोरमा आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न काम गरे।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
उनले कसरी सहयोग पाए Jose Mourinho: युवा कोच र स्टोर प्रबन्धकको रूपमा धेरै पैसा मल्टिटास्किंग भेला गरेपछि, 1990s मा ढिलो ब्रान्डन रोडर्सले उन्नत कोचिंग शिक्षा प्राप्त गर्न स्पेनमा यात्रा गर्ने निर्णय गरे। शिक्षा पछि र पढाइमा आफ्नो जागिर कायम गरेपछि, उनले धेरै शीर्ष क्लबहरूसँग जागिरको लागि आवेदन दिन शुरू गरे, जसमध्ये एउटा नयाँ जीवन प्राप्त चेल्सी एफसीले व्यवस्थापन गरेको थियो। Jose Mourinho.
ब्रान्डन रोडर्स चेल्सी युवा कोचको रूपमा दिनहरू।
तपाईंलाई थाँहा थियो? Jose Mourinho उनको ब्रान्डन रोडरको सीभीबाट प्रभावित भए कि उनले उनलाई चेल्सी युवाको लागि अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रित गरे जुन उनले पारित गरे। रजर्सले फुटबलको ठूलो संसारमा प्रवेशको लागि पढ्नको लागि एकेडेमी निर्देशकको रूपमा आफ्नो जागिर छोडे र २०० 2004 मा चेल्सी एकेडेमीका प्रमुख युवा प्रशिक्षक भए।
Jose Mourinho रजर्सलाई दुई वर्षको चेल्सी जादूमा रिजर्भ टोली प्रबन्धक हुन प्रोत्साहित गरियो। यो पदोन्नती आयो किनकि ब्रान्डन आफ्नो मालिकप्रति एकदम वफादार थिए (तल चित्रमा) जसले उसलाई विकास गर्ने अवसर दियो।
जोस मोरिन्होले चेल्सीसँगको आफ्नो समयमा बफादारीको कारण ब्रान्डन रजर्सलाई बढावा दिए।
निम्न विशेष को प्रस्थान, ब्रान्डन रजर्सले त्यो स्थितिलाई पछिको चेल्सी ब्यवस्थापक अब्राम ग्रान्ट र लुइज फिलिप स्कोलारीले राखेका थिए। बढ्नको लागि पर्याप्त समय पाए पछि, ब्रान्डन रोडर्स वाटफोर्ड, रिडि and र सर्वशक्तिमान स्वान्सी शहरको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा प्रस्थान गरे।
स्वानसी शहरमा, कम लोकप्रिय कोचले सार्वजनिक मान्यता प्राप्त गर्न शुरू गरे किनकि उसले वेल्श क्लबलाई माथि उडानमा निर्देशित गर्‍यो, यो उपलब्धी जसले उनलाई एक्सएनयूएमएक्स लिभरपूलको काम दियो। लिभरपूलमा, ब्रान्डन रोडर्स 2012 प्रिमियर लिगको उपाधि जित्नको लागि नजिक आए। जितेनन् पनि, उनले क्लबको लागि च्याम्पियन्स लिग फुटबल (पाँच बर्षमा पहिलो पटक) सुरक्षित गरे।
लिभरपूलबाट बाहिर निस्केपछि रोडर्सलाई स्कटिश प्रीमियरशिप च्याम्पियन सेल्टिकको व्यवस्थापक नियुक्त गरियो। बरु क्रुम्बल, पूर्व लिभरपूल कोच बल देखि अर्को ताकत। उ सेल्टिकले आफ्नो पहिलो बर्षमा अपराजित घरेलु सीजनमा नेतृत्व गर्‍यो, र यसलाई सबैमा समेट्न, ट्रेबलहरू उसको पहिलो दुई सीजन दुबै मा।
पढ्नुहोस् राफा बेनिटेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
ब्रान्डन रजर्सले सेल्टिकको लागि दुई पटक ट्रबल जितेका थिए- उनको प्रबन्धकको रूपमा उच्च सम्मान।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
चोटपटक र फुटबल खेल्न छोड्ने निर्णय गरेको क्षण पछि ब्रान्डन रोडर्सले आफ्नी प्रेमिका सुसानसँग भेट गरे जब उनी शरीर थिएनन्। दुबै मिति करीव एक दशक को लागी। ब्रान्डन एक्सएनयूएमएक्स वर्षको थिए जब उनले सुजनलाई वर्ष एक्सएनयूएमएक्समा विवाह गरे WH WHIL उहाँ अझै व्यवस्थापकीय विश्वमा एक शरीर हुनुहुन्थ्यो।
ब्रान्डन रोडर्सकी श्रीमती सुसान उनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद हुनु भन्दा पहिले खुशी सँगै बस्दै थिए।
सुसन रोडर्स आफ्नो श्रीमानसँग बाक्लो र पातलो भएर रहे, जोन लुइसमा उनी स्टोर म्यानेजर थिएदेखि जब उनी चेल्सी युवा प्रशिक्षक भए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनी लिभरपूलमा आफ्नो कोचिंग क्यारियरको शिखरमा पुगे। दुबै प्रेमीले दुई बच्चाको साथ आशिष् दिएका छन्; एन्टोन रोडर्स (जन्म; 26 जनवरी 1993) र Mischa Rodgers। तल सुसानका ब्रेन्डन रोडर्सको बच्चाहरूको फोटो छ।
ब्रान्डन रजर्सका बच्चाहरू भेट्नुहोस् - एन्टोन र मिशा रोडरहरू।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… ब्रान्डन रजर्सको छोरा, एन्टोन माइकल रडजर्स आफ्नो बुवाको पदचिन्ह पछ्याए। आयरिश प्रोफेशनल फुटबलर जसले मिडफिल्डरको रूपमा खेल्छन् उनले २०० youth देखि २०११ सम्म चेल्सी एफसी एकेडेमीबाट युवावस्थाको जीवन सुरु गरे जहाँ उनका बुवाले उनको प्रशिक्षक बनाए।
द तलाक कथालिभरपूलमा रोडर्सको कार्यकालमा उनी र सुसनबीचको सम्बन्ध चिसो हुन थाल्यो र यसले दुई पक्षबीच गहन अदालतको युद्ध भयो। वित्तीय सम्झौता प्रदान गर्न आवश्यकता ब्रान्डन रजर्सले आफ्नो पारिवारिक सम्पत्ति साम्राज्यमा मिलियन मिलियन पाउण्ड सम्बन्ध विच्छेदमा संलग्न भएको देखे जसमा करोडौं पाउन्डको १०२ घरहरू छन्।डेलीमेल रिपोर्ट).
रजर्सले 14 बर्ष पछि 2015 वर्ष पछि उनकी श्रीमती सुसानसँग सम्बन्धविच्छेद गरे। उनी सहनशील थिए र उनको भर्खरको श्रीमती चार्लोट सेरेलसँग विवाह गर्नु भन्दा पहिले दुई बर्ष प्रतिक्षा गरे। यो परिकथा विवाह थियो जुन स्कटल्याण्डको लोच लोमन्डमा वर्ष 2017 मा भयो।
ब्रान्डन रजर्सले स्कटल्याण्डको लोच लोमन्ड गोल्फ क्लबमा शार्लोटसँग विवाह गरे।
ब्रान्डन रजर्सले 2017 मा सुश्री Charlotte Searle विवाह गरे चार महिना पछि मात्र उनले न्यु योर्कमा प्रस्ताव गरे। उनको विवाह हुनु अघि, श्रीमती शार्लोट सिएरल एक तलाक थिइन जसले रजर्सलाई भेटिन् र उनी काम गरीरहेको बेलामा लिभरपूल एफसी यात्रा समन्वयक र ऊ अझै लिभरपूलको व्यवस्थापक थियो। उनीहरूको पहिलेको भेट ब्रेन्डन रोजर्सको वैवाहिक मुद्दाहरूको कारण हो कि थिएन भन्ने कुरा थोरै मात्र थाहा छ जुन उनको पूर्व पत्नी सुसानसँग सम्बन्ध विच्छेदको कारण बन्न पुग्यो।
शार्लोट Searle उनको तस्वीरमा हरेकमा विश्वासको आश्रय छ। उनी एक निःस्वार्थ व्यक्ति हुन् जसले उनको मान्छेलाई भावनात्मक सहयोग पुर्‍याउनु भन्दा बढि केहि गर्दैन, यसको मतलब तपाईले आफ्नो जीवन र टाढाको जागिर राख्नु हुन्छ।.
शार्लट Searle सेल्टिक मा उनको पतिको सफलता को हरेक भाग को मजा थियो।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
ब्रान्डन रोडर्स व्यक्तिगत जीवन फूटबल मामिलाबाट टाढा जान्न तपाईंलाई उहाँको व्यक्तित्वको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। पिचबाट टाढा, रजर्सलाई एक मित्रैलो, विनम्र र उदार व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिएको छ जसले करीव सबैको साथ साथीलाई प्रेम गर्दछ -उहाँको वफादार फ्यान देखि रेस्टुरेन्ट वेटर सम्म।
ब्रान्डन रोडर्स व्यक्तिगत जीवनलाई फुटबलबाट टाढा जान्न।
रजर्स खुशी मा विश्वास गर्छन् पैसाको पछि भन्दा पनि तपाईले यो बनाउनु जरूरी छ। रिपोर्टका अनुसार, उनले एकपटक ए बाट दृष्टिकोण अस्वीकार गरे चिनियाँ क्लब गर्मी को समयमा 2018 बताउँदै बीबीसी स्कटल्याण्ड that "चीनको साथ, यो ठूलो पैसा हो तर मैले यहाँ खुशी पाएको छु। "
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
हाम्रो लेख्न को यस भाग मा, हामी ब्रान्डन रजर्सको परिवारका सदस्यहरु को बारे उनको आमाबाट शुरू हुने बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्दछौं।
ब्रान्डन रजर्सको आमाको बारेमा: क्रिस्टिनाको आफ्नो पतिबाट फरक फरक ईसाई धार्मिक दृष्टिकोण थियो जुन उनले ब्रान्डन र तिनका भाइहरूमा कुनै नकारात्मक प्रभाव पार्न दिइनन्। क्रिस्टिना रजर्स २०१० मा उनको मृत्यु नहोउन्जेल एक भक्त प्रदर्शनकारी थिइन्, जुन वर्ष उनी दु: खी हृदयघातको सिकार भएकी थिइन्।
ब्रान्डन रोडर्स बुबाको बारेमा: ब्रान्डेन रजर्सका बुबा मलाला रजर्स एक चित्रकार, डेकोरेटर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भक्त क्याथोलिक थिए। उहाँ बित्नुभयो र जीवनको अन्तिम चरणमा क्यान्सरबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ। सन् २०१० मा उनकी श्रीमती क्रिस्टिनाको मृत्युपछि मालाकीले यो सहन सकेनन। उनको श्रीमतीले संसार छोडेको केही समयपछि उनको क्यान्सर रोगको प्रभावबाट मृत्यु भयो।
ब्रान्डन रजर्स ब्रदर्स: ब्रान्डन रजर्सको परिवारमा पुरुष भाईबहिनी मिलेर बनेको छ र माथि उल्लेख गरिए अनुसार उहाँ आफ्नो परिवारको एक मात्र सदस्य हुनुहुन्न जुन सफल हुन पाए। ब्रान्डन र उनको भाई, मालाची रजर्स Jnr सफल रजर्सको रूपमा परिचित छन्। मालाची रोडर्स जेनरले तल चित्रण गरेकोमा म्यूजिक क्यारियरको खोजीमा लागेर आफ्नो नाम कमायो नेशविल, टेनेसी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
पढ्नुहोस् आंद्रे विला-बोस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
ब्रेंडन रजर्सको भाइ-डेक्लान रजर्सलाई भेट्नुहोस्।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… नैभभिलमा आधारित मालाची रजर्स Jnr जसलाई उपनाम दिइएको छमला'बीबीसी प्रतिभा कार्यक्रममा तारांकित'देश कूल'उनको जन्म उत्तरी आयरल्यान्डमा युएस (टेनेसी) जानु अघि जहाँ उनी एक साधु नायक भए। जीवनको अर्को तर्फ, ब्रान्डन रोडर्स भाइहरू मध्ये एक डेक्लान रजर्सले यसलाई धनी र सफल बनाउन सकेन। गरिब Pण को लागी पीछा गरे पछि गरीब चित्रण रोडरहरु, तल चित्रमा एक पटक दिवालियापन संग थप्पड मारियो।
ब्रान्डन रजर्सको ब्रेक भाई-डेक्लान।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
ब्रान्डन रजर्स एक करोडपति बास हो जसले एकपटक 8 illion मिलियन डलरको सुन्दर मुआवजा प्याकेज प्राप्त गरे जब उनलाई अक्टोबर २०१p मा लिभरपूल प्रबन्धकबाट बर्खास्त गरिएको थियो। सेल्टिकमा सर्दै, उनी क्लबको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कमाई पाएको मालिक पनि बने, लगभग कमाई Week 2015 एक हप्ता
यी सबै पैसाहरूको बावजुद, ब्रान्डन बाहिरको औसत जीवनशैली बिताउँछन्। यो सod्केत गर्दछ कि रजर्ससँग एक छ कसरी आफ्नो वित्तीय जाँच र व्यवस्थित गर्न को लागी बलियो आधार। ऊ एक सामाजिक मिडिया व्यक्ति होईन, कुनै खाता छैन (लेखेको समयमा) र केवल आफ्नो काममा केन्द्रित।
ब्रान्डन रोडर्स लाइफस्टाइल तथ्यहरू चिन्न।
ब्रान्डन रजर्स बाल्यकाल कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उसको जीवनको कठिन4वर्षहरू: वर्षहरू 2010- 2014 बाट सुरू हुँदै को सबैभन्दा दर्दनाक वर्ष हो भनिन्छ ब्रान्डन रोडर्सको सम्पूर्ण जीवन। ती वर्षहरू पारिवारिक समस्याहरूले ग्रस्त थिए जुन व्यावसायिक सफलताको दबाबको विपरित थियो (जस्तो कि लिभरपूलसँग उनका समयमा पनि देखिन्थ्यो)। सुरू गरेर, परिवारको हृदय विदारक शुरू भयो जब उसले आफ्नो आमा गुमायो, त्यसपछि केही महिना पछि उसको बुवाको साथ। त्रासदी उत्तराधिकार जारी रह्यो जब रोडर्सले आफ्नी श्रीमती गुमाए (तलाक मार्फत), आफ्नो सम्पत्ती हरायो (तलाक गर्न) र अन्तमा, आफ्नो प्रतिष्ठित लिभरपूल काम गुमाउँदै।
उनको पछिल्लो पत्नीको पूर्व पतिले आफ्नै जीवन लिए: ब्रान्डन रोडर्सको नयाँ श्रीमती शार्लोट सेरलको पहिले ब्यापार विकास प्रबन्धक स्टीवन हिन्दसँग विवाह भएको थियो। तल चित्रित दुबैको १ 17 महिना विवाह भएको थियो, एक छोरी सँगै थियो जसमा अन्ततः २०१ div मा सम्बन्धविच्छेद हुनु अघि।
ब्रान्डन रोडर्सको श्रीमान्को श्रीमान्को श्रीमान्ले छोडेर गएपछि उनको श्रीमान्को जीवन समाप्त भयो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्टीभन हिंड लोकप्रिय लन्डन बास्को होटलमा उनको कोठामा मृत भेटियो। उनको साथीले अक्टुबर २०१ work को आसपास कामका लागि असफल भएपछि उनको मृत्यु भएको देखेका थिए। ब्रान्डन रजर्सकी पत्नीका पूर्व पतिले नोट लेखेपछि आफ्नै ज्यान लिएऊ जान सकेन'।
उनका छोरा आक्रमणको अभियोगमा थिए: ब्रान्डन रजर्स आफ्नी श्रीमतीको साथ छुट्टिए पछि, उनको परिवारको समस्या बन्दै गयो। यस पटक, रजर्सको छोरा (एन्टोन) र अन्य तीन व्यक्ति समस्यामा पर्न गए। उनीहरूले आफ्नै तस्बिर खिचे जब जवान * युवतीले युवतीलाई कुटपिट गरिरहेका थिए, यस्तो कारबाहीले उनीहरूलाई पक्राउ गरियो र अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
ब्रान्डन रोडर्स सोनलाई एक पटक पक्राउ गरिएको थियो जब उनले एक महिला माथि शारीरिक हमला गरे।
यो अपराध जुलाई २०११ मा ब्राइटनमा अवस्थित जुरीको इन होटलमा भएको भनिएको थियो। दुःखको कुरा, ब्रान्डन रोडर्सले आफ्नो छोराको अदालतको सार्वजनिक सार्वजनिक ग्यालरीबाट हेरे। एन्टोनलाई पछि से * यूआल आक्रमणको अभियोग लगाएर निर्दोष तुल्याइयो, जुन उनका बुवाले लेबल लगाए 'एक अपमान'
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो ब्रान्डन रोडर्स बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।